Maxaa ka jira in Korjoogto aysan ka qeyb galeyn Doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka ? – XAMAR POST
Maxaa ka jira in Korjoogto aysan ka qeyb galeyn Doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka ?
Xildhibaan Nuur Iidow Bayle oo ah Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Golaha Shacabka ayaa sababta arrintan ay ku timid waxa uu ku sheegay in aysan muhiim aheyn dad badan oo hadana aanay muuqan wax qabadkooda.
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya waxaa si aad ah looga dareemayaa diyaar garowga Doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo sida uu qorshaha yahay dhaceysa 30-ka bishan April.
Xiisad Colaadeed oo ka taagan gobolka Galgaduud